Igbo Mass Readings for Tuesday 7th Week of Easter | Catholic Lectionary
TUESDAY: IZU UKA NKE ASAA N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.
Ihe Ogugu nke mbu – 20:17-27
Pol siri na Miletus ziga ozi n’Efesus ka ndi okenye nzuko Kristi no ebe ahu biakwute ya. Mgbe ha bjaruru, o siri ha, “Unu maara nke oma otu m si noo n’etiti unu ogologo oge a niile site n’ubochi mbu m zoro ukwu n’ala Eshia ruo taa. Unu huru na-ejiri m obi umeala, na`anya mmiri na-agara Onyenweanyi ozi, n’ime onwunwa di ich-iche dakwasiri m, site n’ajo izu niile nke ndi Juu gbara megide m.
Unu huru na ahapughi m ime ka unu mara ihe obyla ga-abara unu uru, mgbe obula m na akuziri unu ihe n’ulo ma o bu n’ihu pha. Adoro m ma ndu Juu ma ndi mba ozo aka na nti, ka ha chegharia, biakwute Chineke, ka ha kwerekwa na Onyenweanyi Jesu. Ma ugbu a lee, ana m aga Jerusalem, site na mmanye nke Mmuo Nso, amaghi m ihe ga-adakwasa m ebe ahu. Naanj ihe m ma bu na Mmuo Nso na-agbara m ama, n’obodo obula m ruru, na iga mkporo na mkpagbu chere m. O nweghi ihe m ji ndu m kporo. Agughikwa m ya n’ihe oke onu karja ije ozi m, ka m gbazuo oso m gazukwaa ozi nke m natara n’aka Onyenweanyi Jesu, nke bu igba akaebe nye ozioma nke amara Chineke. Ugbu a, lee, amatala m na unu bu ndi m gaghariri n’etiti ha, na-ekwusa ozioma alacze Chineke, agaghi ahu m ozo. Ya bu, n’ubochi taa ana m agba akaebe na aka m di ocha n’ebe obara unu niile dj. N’ihina ahapughi m ime ka unu mara ndumodu niile nke Chineke.
ABUOMA NA AZIZA – Ps: 68: 10-11, 20-21.
Aziza: Buoronų Chineke abų, unų alaeze nke uwa.
Chineke i mere ka ngozi gi na-erudata n’ala dika mmiri ozuzo, oge ndi nke gi dara mba i nyere ha ike; Ndi ezinuulo gi chọtara ulo ebe obibi, nke i wetara site n’afoma gi maka ndi di umeala. Az./
Ngozi diri Onyenweanyi n’ubochi niile, Chineke onye na-azoputa anyi, na- ebukwa ibu aru anyi: Chineke anyi a by Chineke na-azoputa, o bu Onyenweanyi Chineke nwe uzo e si agbanari onwu. Az./
O buru na unu so Kristi bilie n’onwu na-achonu ihe di n’eluigwe ebe Kristi no n’aka nri nke Chukwu.
OZIOMA – 17:1-11.
Mgbe Jesu kwuchara ihe ndi a, o leliri anya n’eluigwe, si, “Nna, oge eruola; nye nwa gi otito ka nwa gi wee nye gi otito. Ebe o bu na i nyere ya ike n’ebe mmadu niile no, ka o nye ndi niile i tinyere ya n’aka ndu ebeebe. Nke a bu ndu ebeebe ahu: ka ha mara gi, onye naani ya bu ezi Chineke; marakwa Jesu Kristi onye nke i zitere. Enyela m gi otito n’elu uwa, n’ihi na aruzuola m oru i nyere m ka m ruo. Ugbu a Nna m, nye m otito n’ihu gi, udi otito ahu nke mu na gi nwere tupu e kee uwa. Emeela m ka ndi ahi i siri n’uwa kponye m mara onye i bu. Ha bu ndu nke gi, i were nye m ha. Ha dobekwara okwu gi. Ugbu a, ha amarala na ihe niile i nyere m si n’aka gi bia. N’ihi na eziela m ha ozi i ziri m zie ha. Ha onwe ha naara ozi ahu marakwa n’eziokwu na esi m n’ebe i no bia. Ha kwerekwaara na o bu gi zitere m. Ana m ekpere ha ekpere. O bughi uwa ka m na-ekpere ekpere. Kama ana m ekpe ekpere banyere ndi ahu i nyere m, n’ihi na ha bu ndi nke gi. Ihe niile m nwere bu nke gi; ihe niile i nwere bukwa nke m.
Aga m enwekwa otito n’ime ha. Ugbu a, anoghikwa m n’ime uwa, ha ka no n’ime uwa, ma ana m alaghachikwute gi. Ya bu, Nna di nso, dokwaa ha nke oma site n’ike nke aha gi, bu aha ahu nke i nyere m, ka ha buru otu dika anyi onwe anyi si buru otu.